VDP - isiZulu
SARS Home > Legal Counsel > Voluntary Disclosure Programme (VDP) > VDP - isiZulu
UHLELO LOKUZIDALULELA (VDP)
Uhlelo Lokuzidalulela (VDP) luka-SARS lusingethwe ngaphansi koMthetho Wentelangeniso, 2011 kusukela ngo-1 kuMfumfu 2012.
Uhlelo Lokuzidalulela Olukhethekile (SVDP) luqalele ukunika abakhokhintela abangathobeli imigomo yentela ithuba lokuhlela kahe impahla yabo nengenisomali elisemazweni ngokuthi bakudalule ngokuzikhethela. Abantu nezinkampani bangafaka isicelo ngesithuba esivuliwe esisuka ngo 1 kuMfumfu 2016 kuya ku-31 kuNcwaba 2017. I-SVDP yenzelwe abantu kanye nezinkampani abangakaze kwasekuqaleni badalule izindaba zabo zentela nezokulawulwa kokushintshisana mayelana nempahla yabo esemazweni aphesheya. Abakhokhintela bangathola imininingwane nge-SVDP ekhasini lwe- SVDP esanda kwethulwa.
Izicelo zingalethwa kuphela nge-eFiling noma emahhovisi eGatsha. Ukuze sikuzisze mayelana nemibuzo ethile mayelana ne-VDP, sididyele imibuzo nezimpendulo. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke kuMhlahlandlela ekupheleni kwaleli khasi.
Isungqangi: Uma unezingqinamba mayelana nokuletha i-SVDP noma i-VDP nge-eFiling, sicela ubheke imihlahlandlela yokufaneleka kweziphequluli.
Imininingwane yokuxhumana nethimba ikhona ekugcineni kwaleli khasi
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-30 kuMandulo 2016 – Ukwethulwa Kohlelo Lokuzidalulela Olukhethekile.
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-20 kuNtulikazi 2016 – Uhlelo Lokuzidalulela Olukhethekile maqondana nempahla nengenisomali elisemazweni aphesheya: Isicelo Sokuphawula Komphakathi (bheka Amazinga Ahlongozwayo Nezamba Zemali kanye Nosomqulu wokuChitshiyelwa Komthetho Wengenisomali, 2016, kanye Amazinga Ahlongozwayo Nezamba Zemali kanye Nosomqulu wokuChitshiyelwa Komthetho Wengenisomali, (wokusingatha) 2016, kanye Nesaziso Esihlongoziwe Esichazayo Ngohlelo Lokuzidalulela Olukhethekile maqondana nempahla nengenisomali elisemazweni aphesheya).
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-12 kuMbasa 2016 – Uhlelo Lokuzidalulela Olukhethekile maqondana nempahla nengenisomali elisemazweni aphesheya: Isicelo Sokuphawula Komphakathi (bheka Amazinga Ahlongozwayo Nezamba Zemali kanye Nosomqulu wokuChitshiyelwa Komthetho Wengenisomali, 2016 kanye mazinga Ahlongozwayo Nezamba Zemali kanye Nosomqulu wokuChitshiyelwa Komthetho Wengenisomali, (wokusingatha 2016).
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-24 kuNhlolanja 2016 –Uhlelo Lokuzidalulela Olukhethekile maqondana nempahla nengenisomali elisemazweni aphesheya
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-02 kuNhlolanja 2016 – U-SARS uyaqhubeka nokungenela ukungathotshelwa kwentela emkhakheni wezitolo ezingama-cash and carry.
Isitatimende sabezindaba esikhishwe ngo-9 kuNtulikazi 2015 – Abanini bama-akhawunti asebhange Lasemazweni bakhuthazwa ukuba basebenzise Uhlelo Lokuzidalulela balethe izicelo zabo ze-VDP ungakashayi kumbe ngawo umhlaka- 12 August 2015.
​Inhloso ye-VDP ngukuphucula ukuzithobisela kwabantu enteleni ngenhloso yokuphatha kahle izinhelos zentela kanye nokusebenzisa zonke izinsiza ezikhona kwa-SARS
U-SARS unanhlosoni nge-VDP?​
​I-VDP ihlose ukukhuthaza abakhokhintela ukuba baphumele obala ngokuzithandela ukuze basingathe izindaba zabo zentela kwa-SARS nokugwema ukuhlawulisa lapho kudalulwa ngaphansi kanye nezinye nje izinhlawulo zokusingatha.
​Zinhlobo zini zentela ezingena ngaphansi kohlelo lwe-VDP?
​I-VDP isebenza kuzo zonke izinhlobo zentela ezisingethwe ngu-SARS (ngaphandle kweyeZemithekelo)
Ngubani ofanelwe ngukufaka isicelo se-VDP?
​Noma yimuphi umuntu noma inkampani abafuna ukuzidalululela izindaba zabo zentela kwa-SARS,inqobo nje uma befanelekile ohlelweni lwe-VDP
​Ingabe kukhona okuyizidingongqangi zesicelo esiqondile se-VDP?
​Yebo, ukuze isicelo siphuse, kudingeka makufezwe lokhu okulandelayo:
Makubandakanye ukungathobi okungazange kudalulwe ngmfakisicelo noma ummeleli wakhe phambilini
Makube ngokugcwele futhi okuphelele ngazo zonke izinto
Makubandakanye amathuba okubizwa kwenhlawulo yokudalula okungaphansi maqondana nokungathobi lokho
Makungaphethi ngokuba khona kwemali ebuyiswa ngu-SARS
Makwenziwe ngefomu nendlela ebekiwe.
​Kwenzekani uma isicelo sami se-VDP singaphelele?
​Isicelo esingaphelele se-VDP siyatshingwa luphiko lwe-VDP ngale kokwazisa umfakisicelo.
Izibonelo zalokhu yilezi –
lapho umfakisicelo engavezi incazelo ngokungathobeli umgomo kwakhe
uma ikhodi yomthmbomali ingekho
Uma isicelo simayelana nezimbuyiselo ezingakalethwa u-SARS asevele ezazi.
​Ifomu lokufaka isicelo libizwa nge-Ifomu Lesicelo Sokuzidalulela (VDP01) futhi ungalithiola kuphela nge-eFiling yakwa-SARS
​Kudingeka mangibe ngobhalisile ku-eFiling ukuze ngikwazi ukufaka isicelo se-VDP?
​Yebo. kusho ukuthi kufanele uzibhalisele i-efiling andukuba ufake isicelo se-VDP.
Kwenzekani uma isicelo sami siphumelela?​
​Isikhathi esivamile sokubuyela kuwe mayelana nodaba yizinsuku ezili-16 zokusebenza
Ngingakwazi yini ukuphikisa noma ngidlulise ukubuyekezwa kwe-VDP?​
​Cha. Ukubuyekezwa kwe-VDP kuletha isivumelwano se-VDP, futhi kufaka phakathi ingenisomali elithelayo elidaluliwe kanti lincike ekutheni sekunethuba elingakanani ukungathobi lokhu kwenzeka, inzalo nezinhlawulo zokukhokha emva kwesikhathi.
​Ngingakwazi ukufaka isicelo sokwaphulelwa inzalo kanye/noma izinhlawulo ezize ngokubuyekezwa kwe-VDP?
​Cha. Inzalo nezinhlawulo ziyingxenye yesivumelwano se-VDP nokubuyekezwa kwe-VDP, kokubili okungujuqu nokuphoqayo.
Yisikhathi esingakanani esivulelwe i-VDP ephumelele?
Kufanele ngenzeni ngemva kokufaka isicelo se-VDP?
Akunasidingo sokucela ukuqinisekiselwa futhi isicelo se-VDP.Uma uhlelo lwe-eFiling lusithathile isicelo, kusho ukuthi sizokuba sohlwini futhi sizosetshenzwa.
Umfakisicelo uzothintwa uma isicelo sakhe se-SVDP sesinikwe umsebenzi we-VDP ukuze asisebenze. Ushicilelo oluyisongezo nolwesekelayo selungalethwa ngemva kwalokho
Ungasihoxisa noma kunini isicelo se-VDP ngokuthumela umyalezonyazi ku- [email protected]
Izimbuyiselo ezilungisiwe noma ezichitshiyelwe ezihambisana nesicelo se-VDP singalethwa kwa-SARS ngemigudu evamisile noma kunini andukuba kusetshenzwe isicelo se-VDP. Uma imbuyiselo isetshenzwe ngu-SARS ngaphambi kokusetshenzwa kwe-VDP, izinhlawulo zukudalula okungaphansi kanye nezokungathobeli imigomo ezifanele ukuxegiselwa kwe-VDP kuzosuswa uma isicelo se-VDP sesisetshenziwe kwaze kwafinyelelwa esivumelwaneni.
Cha, akukho zinhlawulo zokuletha emva kwesikhathi kumbe inzalo efanelekile ekuxegiselweni kwe-VDP, Lokhu makukhokhwe lapho ubuyekeziwe.
Kungenzeka ukuba ummeleli afake isicelo se-VDP egameni lomkhokhintela?​
​Yebo, ummeleli angafaa isicelo se-VDP egameni lomkhokhintela
Kudingekani ukuze ummeleli afake isicelo egameni lomkhokhintela?​​
​​Bobabili umkhokhintela kanye nommeleli kufanele babe ngababhalisiwe ku-eFiling ummmeleli kufanele abe ngoxhunyiwe ezinhlotsheni zentela nakumaphrofayili.
Kwenzekani uma umyalezo olandelayo ‘Isicelo esingenagama kufanele silethwe lapho umkhokhintela engabhalisele uhlobo lwentela olufakelwe isicelo se-VDP’ uvela lapho ngiletha isicelo se-VDP?​​
​Lokhu kuveza ukuthi umkhokhintela kanye nommeleli kababhalisiwe kwi-eFiling ngezinhlobo zale ntela kanye nakumaphrofayili
​Guide for the Voluntary Disclosure Programme
​Guide for Treatment of PAYE for VDP Purposes
​Draft Guide: Special Voluntary Disclosure Programme (v1.2) New!
​Special Voluntary Disclosure Programme for Tax Relief
​Special Voluntary Disclosure Programme for Exchange Control Relief
​Special Voluntary Disclosure Programme
Ngemibuzo yentela maqondana ne-VDP ne-SVDP, ungavakashela uphiko lwe-VDP ngokuhlela idinga kuphela futhi ungabathinta kule mininingwane engezansi:
​0800 864 613 (Hours: 08:00 – 16:00)
​VDP Unit, South African Revenue Service, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
​VDP Unit, South African Revenue Service, Private Bag X923,Pretoria, 001
Ngemibuzo mayelana ne-SVDP Yokulawulwa Kokushintshisana, Ibhange Lombuso laseNingizimu Afrika lingathintwa kule mininingwane elandelayo:
012 647 2243 (Hours: 08:00 – 16:00)​
​FinSurv SVDP Unit, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
​Finsurv SVDP Unit, P O Box 3125, Pretoria, 0001
mininingwane ye-GPS ​
Last Updated: 01/08/2017 10:37 AM ​